e-visa Googlier.com Search Results
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ခရစ္စတီယန် လရှရဗီ နှင့် တွေ့ဆုံ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ခရစ္စတီယန် လရှရဗီ အား ယနေ့နံနက်(၁၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ သည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု၊မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပြင်သစ်-မြန်မာကုန်သည်ကြီးများအသင်း တည်ထောင် ဆောင်ရွက် နေမှု၊ ပြင်သစ် ကုမ္ပဏီများ၌ မြန်မာလုပ်သားများ ခန့်ထားဆောင်ရွက်မှု နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ဖြစ်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်း များဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု၊ လုပ်သားစွမ်းရည်မြင့်မားရေးနှင့် လုပ်ငန်း ခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်မှု၊ ILO နှင့်ပူးပေါင်းကာ မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်သမားဥပဒေရေးဆွဲဆောင် ရွက်နေမှုနှင့် အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက် နေမှု၊အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် အစိုး ရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်မှု နှင့်အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးအတွက် ရှေးရှုဆောင်ရွက်နေမှု၊ ပြင်သစ် နိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလွယ်တကူ လာရောက်နိုင် ရေးအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ နှင့် e-Visa ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးထားမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားများ ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရေးနှင့် အလည်အပတ် ခရီးသွားများလာရောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာလွယ်ကူစေရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု၊ e-Government ကော်မတီ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် လူတစ်ဦးလျှင် နံပတ်တစ်ခုပေးမည့် Unique ID အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာကတ်ပြားများအား ဒီဂျစ်တယ်စနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်၊ UID ၊e-ID စနစ်နှင့် နယ်စပ်ဒေသ များအပါအဝင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကို အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
Comment on Interesting thread re: online dating and its impact by Dave
https://dalrock.wordpress.com/2012/11/18/she-needs-more-men/ Dalrock providesaspot-on analysis of online dating without the technical jargon. Western women are pricing themselves out of the marriage market. Human eggs are highly perishable, so HODLing them is notasound investment strategy. My parents met "online" in 1968 throughaservice called "Data Mate", real pioneers they were. I heldabachelor's degree andaseries of high-paying jobs but was too spergy to attractawoman, so I did the fiance-visa thing instead.